မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): Facebook မသုံးချင်တော့၍ အကောင့်ကို အပြီးဖျက်နည်းနဲ့ခေတ္တခဏ ပိတ်ထားနည်း
ဒီနည်းလေးကတော့ အကောင့်ကို မသုံးချင်တော့၍ ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလေး
ကိုလုပ်ကြည့်ပါ အခုတလော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖွဘုတ်ခေါ်Facebook ကို
မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင် အပြီးဖျက်တဲ့နည်းရှိသလို ခဏအနေနဲ့ ပိတ်ထားချင်လည်း
ရပါတယ် ။လုပ်တဲ့နည်းက Facebook helpထဲမှာ ရေးထားပြီးသားပါ ။
အဲ့နည်းကတော့ အကောင့်ကို ခဏပိတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ
ပျောက်နေမှာပါ ။ လိုချင်တဲ့အချိန် ၊ ပြန်သုံးချင်တဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ပြီး Active လုပ်လို့ 
ရပါတယ် message,invite,request တွေတော့ ၀င်နေမှာပါ ကိုယ်ပြန်သုံးတဲ့အချိန်
မှာ ပေါ်လာမှာပါ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အပြီးမဖျက်ချင်ရင် ဒီနည်းသုံး.....။
အပြီးအပိုင် ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ -www.facebook.com/delete.
ကိုနှိပ်လိုက်ပါ. အကောင့်ဝင်ထားတာဆို Deleteပေါ်လာတယ်
မ၀င်ရသေးရင်တော့ အကောင့်ဖြည့်လိုက်. ဖျက်တာမြန်ပါတယ်
14 ရက်ကြာမှသာ ပျက်တာပါ ဒီကြားထဲ ပြန်ယူချင်လည်းရတယ်
Author Anonymous at 1:28:00 PM
Labels: Account ကို အပြီးဖျက်နည်း, Facebook ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ
တစ်လုံးမောင်...မကြီးလွမ်းက ဖေ့ဘွတ်လည်းရှိဘူး... ဂျီတစ်ကောင်နဲ့တောင် လည်တယ်တယ်။ ဗဟုသုတရဖို့ ဖတ်သွားတယ်။ အမဲရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ ခလေးတို့ရေ ကိုတော့ သဘောကျစွာ ပြုံးသွားတယ်နော်။
Locked ကျနေတာကို ပြန်ဖွင့်တဲ့နည်းရှိဘူးလား
ပြန်ဖွင့်တဲ့နည်းက အများကြီး၇ှိတာ ဒွေးလေးရ ဘယ်လို ဖြစ်တယ်ဆိုတာသာသေချာပြောပြ ပြန်ရစေရမယ်..
အမောင်ရေ။တို့က ဖွဘွတ် ယောင်လို့ပါ ဖေ့ဘွတ်ကို စသုံးခါစဆိုတော့ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း များများသိချင်တယ်။ လုပ်ပေးအုံးနော်။ ဖေ့ဘွတ်အကြောင်
Naymyo TCK said...
ကိုစွယ်စုံခဗျာ ကျွန်တော်အကောင့်က ဖုန်းမှာသုံးလို့ ရတယ် လက်တော့မှာက ပရိုဖိုင်ပဲပေါ်တယ် ကျန်တာဘာမှသုံးမရဘူး တခြားအကောင့်ထည့်ရင် အားလုံးအိုကေတယ် ထိုင်းမှာနေတာလိုင်းကလဲအပြစ်မဟုတ်ပြန်ဘူး setting မှားနေလားမသိဘူးနော် ဒီအကောင့်တစ်ခုထဲသုံးနေတာ သုံးနှစ်ကျော်ပြီမို့အရမ်းနှမျောနေတာပါ အရးကြီးတဲ့ အဆက်အသွတွေလဲရှိနေတော့ ဘယ်လိုပြန်ပြင်ရင်ရနိုင်ပါလဲ အကြံပေးပါအုံးခဗျာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်....naymyotck@gmail.com ကကျွန်တော့ မေးလ်ပါခဗျာ
soehtet paing said...
ဘယ်လိုလုပ်ရတာလည်းအကိုကျွန်တော်မဖြတ်ခြင်သေးဘူး ခ်ခ်စတာပါ ကိုကိုစွယ်စုံကျမ်းရယ်
mya nmar said...